ကွန်ပျူတာဈေးရောင်းပွဲတော်ရဲ့ ပုံရိပ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ကွန်ပျူတာဈေးရောင်းပွဲတော်ရဲ့ ပုံရိပ်များ
Posted by manawphyulay on Oct 26, 2011 in Photography | 18 comments
၂၁ ရက်ကနေ ၂၃ ရက်နေ့ထိ တပ်မတော်ခန်းမမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ကွန်ပျူတာ အရောင်းဈေးပွဲတော်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၃ ရက်နေ့မှ ရောက်သွားတော့ နောက်ဆုံးနေ့ပေမယ့် လူတွေများကြီး တိုးကြိတ်နေကြတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။
PC World ကလည်း ထွက်ပြီးသား စာအုပ်များကို ဝေငှကမ်းလို့ ယူလာခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။
ဈေးနှုန်းအနည်းငယ် လျှော့ရောင်းချနေတာ တွေ့ရှိရတယ်
ပရင့်တာကိုလည်း ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးက အပြိုင်အဆိုင်ရောင်းချနေလေရဲ့
ပြခန်းတွေကတော့ အပြိုင်အဆိုင် ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ၀တ်စုံပြည့်တွေနဲ့ စည်ကားလို့နေတယ်။
မော်ဒန်တွေကလည်း အပြိုင်အဆိုင် ပြနေကြတယ် ဘာတွေပြနေသလဲဆိုတာ ကြည့်တာနဲ့တင်သိလောက်ပါတယ်လေ
တချို့ကုမ္ပဏီတွေကလည်း သူ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကို အဲကိုးသံနဲ့ စက္ကန့်မှတ်ပြီး အော်နိုင်တဲ့သူကို ဆုပေးနေတာလေ... ရေသောက်ပြီး လာအော်နေကြတာ အများကြီးပဲ တွေ့ခဲ့ရတယ်။
အဆိုတော်လေးတွေကလည်း တက်သစ်စ အခွေထွက်တယ်ဆိုလာပဲ။ ဒီလိုပုံစံလေးတွေပေါ့။
အင်း ဘလက်ဆရာ ကတော့
(မော်ဒယ်လေးတွေရဲ့) မျက်နှာကို သေချာမမြင်ရပါကြောင်းနှင့်
ကြီးမားထွားကျိုင်း ဖြူစင်ဝင်းပ သော ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကိုသာ
မြင်မိပါကြောင်း မနောဖြူလေးရေ။ ဟားဟား နောက်တာနော်။
“ကုမ္ပဏီနာမည်ကို အဲကိုးသံနဲ့ စက္ကန့်မှတ်ပြီး အော်နိုင်တဲ့သူကို ဆုပေးနေတာလေ”
အဲဒါ DREAMBOAT က ကိုမောင်မောင်အေး ကြီးရဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ။
အဲဒီပွဲမှာ DREAMBOAT ပါလားဗျ။
ခုက ICT ပြပွဲတွေဆိုတော့ ဆော့ဝဲလ်တွေနဲ့ ဟတ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အရောင်းပွဲတော်ပေါ့။ လေးချောရဲ့။
အရင်ရောက်ဘူးတဲ့ ပွဲတွေနဲ့စာရင် ဆိုင်တွေ သိသိသာသာ ကိုနည်းသွားတယ်။
အနုပညာမျက်စိရှိသူတွေထဲ ဦးချောလဲ ထိပ်ဆုံးက ပါလာဘီထင်ပါ့..
အကြိုက်ချင်းတူရင်တော့..မောင်ပေတို့ နဲ့ လုရဦးမယ်..
ပြုံးပြီး လက်ပိုက်ပြီး ပြိုင်မလို့စဉ်းစားနေတယ် ၊ မတွေ့ဘူးလား ။
တကယ်တမ်းက မနောဖြူလေးပါ မောဒန် တက်ရှောက်ပီး ရိုက်လာရင် ပိုကောင်မှာဗျ ။ မနောဖြူလေး ကို မြင်ဖူးအောင် ။ ချောလားဟင် ။ စတာနော် ချစ်လို့ ၊ ဟုပ်ပါဘူး ခင်လို့ ။ စိတ်ဆိုး နဲ့ နော် ဟီး..
မိုဒယ်လုပ်တဲ့.. မိန်းကလေးငယ်တွေပါ ..အလုပ်ရတာပေါ့…။
အလှဆုံးမိန်းကလေးတယောက်ငှားပြီး.. အထွက်ပေါက်မှာ.. ပြခန်းထဲက..ဘယ်ပစ္စည်းစိတ်အ၀င်စားဆုံးလည်း.. ဘာဝယ်ဖြစ်လည်း.. ထွက်လာတဲ့သူတွေကို… ဆာဗေးဖြည့်ခိုင်း.. လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်..။
ဆာဗေးရလဒ်ကို.. ပြခန်းဖွင့်တဲ့..ကုမ္ပဏီတွေကို.. အမြတ်တင် ပြန်ရောင်းစားနိုင်တာပေါ့..။
ကျုပ်သာ ရန်ကုန်မှာ.. ဂျာနယ်လုပ်နေရင်.. အဲဒီလိုလုပ်ပေးတယ်..။
အရင်ခေါက်တွေ တုန်းကတော့ ဆာဗေးလုပ်တာ ကြုံဘူးတယ် ၊ ဖောင်ဖြည့်ပေးတဲ့သူကို ကံစမ်းမဲ နှိုက်ပေးတယ်( လို့ပြောတယ်) တစ်ခါမှတော့ မပေါက် ဘူးသေးဘူး
တိုးတိုး တိတ်တိတ် ကြားဖူးတာတော့ အောက်ဆုံးပုံက သီချင်းဆိုနေတဲ့ ကလေးမထက် ဒေါ်မနောက ပိုချောတယ်ဆိုပဲ
သူဂျီးအကြံနဲ့ဆို … အလှဆုံး မိန်းကလေးခမျာ နားတောင် နားရမှာမဟုတ်ဘူး … ။
သားရေ တမျှားမျှားနဲ့ … ဆာဗေးဖြေပေးမယ့်လူတွေ တန်းစီနေမှာ မြင်ယောင်သေး… ။
တကယ်ပွဲကို စိတ်ဝင်စားလို့ ..လေ့လာချင်တဲ့လူတွေ ၊ ကွန်ပျူတာ ပစ္စည်းဝယ်ချင်တဲ့ လူတွေထက် … ဟေးလား ၀ါးလား ….. ရောသောပေါသော …ငမ်းကြောထ ၊ ဖလန်းဖလန်းထချင်နေတဲ့လူတွေများတယ် …. တကယ် …တကယ် …
အင်တာနက်ဂျာနယ်က Survey Form ပေးပြီး ကံစမ်းမဲ ဖောက်ပေးမယ် ပြောပါတယ်… Survey Form တွေလဲ ပလူပျံနေအောင် တွေ့ခဲ့ပါတယ်… သူကြီးရေ…
ipad2ရောင်းလားဗျိုး ဘယ်ဈေးတုံး ဟိုဘက်မှာမှားမေးမိတယ်
iPad2 က ကိုချိုတို့ဆီမှာ ပိုဈေးချိုမှာ ဒီမှာက တစ်ဆင့်ခံတွေဆိုတော့ ဈေးကတော့ ကြီးမှာပေါ့နော်။
ဟုတ်ပ ဒီမှာus$500 ပဲ ရှိပါတယ် ပြီခဲ့တဲ့၂လက ASUS (i5) 14inch double cpu A52J ကွန်ပြူတာဝယ်တာ US$600 ပဲကျပါတယ်နောက်ပိုင်းတွေမှာ ကွန်ပြူတာဈေးလေးတွေပါတင်ပေးပါမယ်
ဒါပေမဲ့ မြန်မာဖွန့် နဲ့ipad2 မို့စိတ်ဝင်စားတာပါ မြန်မာဖွန့် ဒေါင်းလို့မရရင်တော့ ကွန်ပြူတာသုံးတာမှ ဂွဒ်သေးတယ်
မော်ဒယ်တွေ အပြိုင်အဆိုင် ပြနေတာ ဘာတွေ ပါလိမ့် လို့သေချာ ကြည့်လိုက်တော့….
မနောရေ.. ကွန်ပြူတာအရာင်းပွဲတော်ဆိုပြီး Acer နဲ့Toshiba ဘဲပုံထဲမှာတွေ့ လို့ဒီနှစ်မျိုးထဲဘဲ ရောင်းတာလား ဒါမှမဟုတ် ကွန်မကောင်းလို့ မတင်ဖြစ်တာလား (သိချင်လို့ မေးတာပါ)
ဒီ ကေအယ်လ်မှာတော့ တစ်နှစ် သုံးကြိမ်(အေပရယ်၊ သြဂတ်စ်တ် နဲ့ဒီဇင်ဘာ လဆန်းပိုင်း) ကေအယ်လ် တွင်တာဝါနားက KLCC မှာ PC Fair လုပ်ပါတယ်.. တကယ့်အစစ်အမှန် လူကြိတ်ကြိတ်တိုးပါဘဲ.. Brand ပေါင်းစုံ Product မျိုးစုံရောင်းပါတယ်.. နောက်များမှ ပို့ စ်တစ်ခုအနေနဲ့ သီးသန့် တင်ပါ့မယ်.. ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုသိချင်တာက ဆော့ဖ်ဝဲ ရောင်းတာတွေဟာ အားလုံး Genuine တွေဘဲလား.. ရန်ကုန်ရဲ့IT ဈေးကွက်အခြေအနေ သိချင်လို့ ပါ
Ko Cho ရေ.. ipad နဲ့ Asus ရဲ့ ဈေးတွေ အဲ့ဒီမှာ ပေါလှချည်လားဗျ.. ကျွန်တော့်အထင် Spec ကွာမယ်ထင်တယ်.. ipad2 မှာတင် WiFi တစ်ခုတည်းပါတာနဲ့3G + WiFi နဲ့memory ကွာတာနဲ့အမျိုးမျိုးတော့ရှိတယ်နော.. ဒီ ကေအယ်လ်မှာ ipad2 3G WiFi 32GB ကို RM 2199 (US 711) ပေါက်ပါတယ်.. အကယ်၍ ရွာသားတွေ ကွန်ပြူတာ ပေါက်ဈေးသိချင်ရင်တော့ တစ်ပါတ်တစ်ခါလောက် ကျွန်တော် ပို့ စ်တင်ပေးပါ့မယ်(အရင်းဈေးသိချင်ရင်တော့ Private Mail နဲ့ ပေါ့နော)
ရိုက်တာတော့ အကုန်လျှောက်ရိုက်တာပဲ။ လူတွေက တိုးနေတော့ ခလုတ်တောင် တိုက်တယ်။ တချို့ကလည်း အပြိုင်အဆိုင် ဈေးလေးတွေ ၉ ထောင် တစ်သောင်း လျှော့လို့ရောင်းချနေရကြတယ်။ ဆော့ဝဲလ်တွေကျတော့လည်း ပြထားတာတွေလည်းရှိတယ်။ ဆိုင်ကတော့ အရင်လောက် မများတော့ဘူး ခုအရမ်းနည်းသွားပြီ သိပ်လည်းမစည်တော့ဘူးလေ… ပစ္စည်းတွေကတော့ မ၀ယ်နိုင်လို့ ငေးပြီး ပြန်လာရတယ်။